May 14, 2022 - Celepedia
မတော်ရသေးတဲ့ ယောက္ခမတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ခရီးထွက်ရင်း ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး
by xyz xyz May 14, 2022 May 14, 2022 0
ပရိသတ်တွေကိုအမြဲပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖန်တီးပေး​နေတာကတော့ကျော်ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေခေတ်ကတည်းကယနေ့အချိန်ထိပရိသတ်အားပေးမှုတွေနဲ့အောင်မြင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာလည်းသူနဲ့ဆုမြတ်နိုးဦးနှစ်ယောက်ဟာ ဟာသvideoလေးတွေအမြဲတင်ပေးလေ့ရှိတာပါ။ အမြဲလိုလိုနှစ်ယောက်ဟာစနောက်နေတဲ့videoလေးတွေဟာသလေးတွေကိုဆေးထိုးပြီးတင်လေ့ရှိတာပါ။ နှစ်ယောက်တူတူအမြဲတွေ့ရတာကြောင့်ချစ်သူလို့တောင်ထင်နေရတာပါ။ လူမှုကွန်ရက်ကနေလည်းပုံရိပ်လေးတွေကိုအမြဲလိုလိုတင်ပေးလေ့ရှိပြီးချစ်နေရတာပါ။ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေသိရှိရအောင် အမြဲဝေမျှပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ကျော်ကျော်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပို့စ်တစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ မတော်ရသေးတဲ့ ယောက္ခမတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ခရီးထွက်ရင်း ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးနေတဲ့ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိနိုင်အောင် ဒီသတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သူတို့နှစ်ယောက်ကို အမြဲရယ်နေတယ်လို့ ပြောနေသူတွေကို နည်းပညာတစ်ခု အသုံးချပြီး ပညာပြလိုက်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
ပရိသတ်တွေကို အမြဲရယ်မောပျော်ရွှင်ရအောင် ဖန်တီးပေးနေသူတွေကတော့ စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူတို့ဇနီးမောင်နှံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ လက်ရှိတွင် အနုပညာလောက ကနေ အပြီးတိုင်အနားယူပြီး အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ အမြဲတင်ဆက်ပေးနေကြပါ။ သူတို့ရဲ့ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက် ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိန်ဖြိုးနဲ့ရီတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း အမြဲလိုလို စောင့်ကြည့်အားပေးနေကြသူများရှိရာ မကြာသေးခင်ကလည်း သူတို့ရဲ့ Facebook Page တွင် ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို အမြဲရယ်နေတယ်လို့ ပြောနေသူတွေကို နည်းပညာတစ်ခု အသုံးချပြီး ပညာပြလိုက်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ လတ်တလောနာမည်ကြီးနေသော ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ effect လေးဖြင့် ဆော့ကစားထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်းကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင် ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
သူမရဲ့ဘဝမှာ အရမ်းကို မွေးချင်တဲ့ ထူးဆန်းတတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့အမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလိုက်တဲ့ နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတဲ့သရုပ်ဆောင် နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်ကတော့ လက်ရှိမှာ Live Sale Queen အဖြစ် နာမည်ကြီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်းအောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေ ရရှိနေတာကြောင့် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ များစွာနဲ့လည်း ကြုံတွေ့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ ကြုံတဲ့အခါမှာလည်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိဘဲ မသိသလိုသာ နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် လူမှုကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် အမြဲလိုလိုဝေမျှပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်ရဲ့Facebook အကောင့်တွင် ပို့စ်တစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူမရဲ့ဘဝမှာ အရမ်းကို မွေးချင်တဲ့ ထူးဆန်းတတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရဲ့အမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ” ငယ်ငယ်လေးထဲက သူများတွေကခွေးမွေးချင်တယ် ကြောင်မွေးချင်တယ် ငါးမွေးချင်တယ် ဌက်လေးတွေမွေးချင်ကြတယ်….ငါ့ကျ တစ်မျိုးးးး ငယ်ငယ်ထဲက ခုချိန်ထိ မျောက် ပဲမွေးချင်တာ😁😁😁ပျင်းရင် သူ့အိုက်တင်တွေထိုင်ကြည့်ချင်လို့😁😁😁သူများတွေက ပြောတယ်…. မမွေးကောင်းဘူးတဲ့…မျောက်ကုတ်ရင် နူတတ်တယ်တဲ့😱ဟုတ်လားဟင်???? Edit 😁😁😁နောက်နေ့ကျ ‌စောင့်ကြည့်နေကြ မျောက် မွေးချင်နေတဲ့ ကျွန်မဆိုပီး တက်လာမယ် Page တွေမှာ😂😂😂” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိနိုင်အောင် ဒီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
မတွေ့ရတာ နှစ်ချီနေပြီဖြစ်တဲ့ အစ်မဖြစ်သူနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံအထိ တကူးတကသွားတွေ့ရင်း စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ပြောနေတဲ့ ယွန်းနဒီလွင်မိုး
Liam လေးဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေဝိုင်းပြီးချစ်နေရတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းဝဒီလွင်မိုးရဲ့သားလေးဖြစ်ပြီးပရိသတ်အချစ်တော်ဖြစ်နေရတာပါ။ အားပေးသူပရိသတ်များတာကြောင့် facebook မှာgpလေးဖွဲ့ပြီးသားလေးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေvideoလေးတွေကိုတင်ပေးနေတာပါ။ သားလေးဟာဖေဖေမေမေတို့ နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန် ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့နဲ့တူတူနေနေတာပါ။ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့ကလည်းမြေးလေးကိုချစ်မဝဖြစ်ပြီး မြေးလေးနဲ့ဆော့ကစားပေးနေတာပါ။ ဖေဖေမေမေတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုအလည်ပြန်လာလေ့ရှိပြီးသားလေးနဲ့တွေ့လေ့ရှိတာပါ။ အခုခေတ်ကာလအခြေနေတွေပြန်လာဖို့မလွယ်တာကြောင့်သားလေးကိုမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခုမှာတော့ဖေဖေမေမေတို့ရှိရာ နိုင်ငံခြားကို ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတီတီတို့နဲ့သွားရောက်ခဲ့တာပါ။ မေမေယွန်းဝဒီလွင်မိုးကလည်း ညီဖြစ်သူနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတင်ထားတာကြောင့်မကြာခင်သားလေးနဲ့မိသားစုပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်။r